Swaarm: mandeha ho azy, manatsara, ary refesina ny fahombiazan'ny dokam-barotra | Martech Zone
Zoma, Oktobra 16, 2020 Zoma, Oktobra 16, 2020 Douglas Karr
Swaarm dia sehatra fizahana mifototra amin'ny zava-bita izay manome ny masoivoho, mpanao dokambarotra ary ny tambajotra manana fahaizana hanara-maso sy hifehezana tanteraka ny ezak'izy ireo amin'ny marketing amin'ny fotoana tena ahazoana antoka fitomboana.
Ny sehatr'asa dia novolavolaina nanomboka tamin'ny fototra ka ho tsotra ampiasaina, nefa mahery, miaraka amin'ny fanodinkodinana fanentanana tarihan'ny data hanampiana ireo mpivarotra handrefesana sy hanatsara ny fanentanana amin'ny vidiny ara-toekarena.
Raha tokony hizotra ambony ambany dia namboarinay io vokatra io. Hatrany am-piandohana dia nanomboka nizaha toetra tamin'ny mpanjifa tena izy izahay mba hahamora kokoa ny hetsika tsirairay, haingana kokoa ary tsara kokoa. Tahaka ny iOS sy Android amin'ny telefaoninay, maniry mafy ny ho rafitra miasa amin'ny Marketing Marketing izahay.
Yogeeta Chainani, mpiara-manorina ary CPO an'ny Swaarm
Manokatra ny sandan'ny data, Swaarm dia vahaolana mitambatra, izay kendren'ny orinasa hamaha ny olana lehibe sasany amin'ny indostria amin'ny fanaovana asa tanana. Na dia manome ny angon-drakitra voafetra ihany aza ny fanolorana tsena amin'izao fotoana izao, mbola mitaky fizotran'ny asa tanana be loatra, ary miaraka amin'ny maodely momba ny vidiny tsy mahomby, Swaarm dia natsangana handresena ireo teboka fanaintainana ireo. Ity sehatra ity dia ahafahan'ny orinasa mandray fanapahan-kevitra avy amin'ny angon-drakitra ary manangana ny orinasany amin'ny vidiny tsara kokoa amin'ny alàlan'ny fanolorana ny ambaratonga avo indrindra.
Naheninay hatramin'ny ampahatelony ny vidin'ny fanarahana anay tamin'ny nifindrana tany Swaarm. Mandritra izany fotoana izany, ireo fitaovana mandeha ho azy dia nanampy anay hampitombo ny fahombiazanay ka hampiakatra ny vola miditra 20%. ”
Thorsten Russ, Tale mpitantana, Evôlisiona
Ny fampiroboroboana ny varotra Swaarm dia misy koa
Swaarm miompana amin'ny filàn'ny mpivarotra tsirairay izay afaka mivezivezy amin'ny alàlan'ny angona an-taonina maro miaraka amina tsindry vitsivitsy sy orinasam-pandrika angona afaka mampiasa ireo fitaovana siantifika angon-drakitra hiroboka lalina ao anaty faritry ny tany.
Mpampiasa mpiara-miasa mpiara-miasa - Ahafahan'ny mpiara-miasa mahita ny laharan'ny fanaraha-maso sy vola miditra amin'ny fotoana tena izy.
Rohy Mahay - Manolotra dokam-barotra CPM ny doka mety ho an'ny mpampiasa sahaza azy, miorina amin'ny algorithma fianarana milina mandroso.
Volavolan-dalàna sy fanamafisana - Atambaro ny isa isam-bolana miaraka amin'ny nomeraon'ny namanao mba handoavana faktiora haingana sy haingana.
Network Syncer & Importer Offer Import - Manafatra ary manangana tolo-tanana avy amina mpiara-miasa marobe.
Optimization CR mandeha ho azy amin'ny fotoana tena izy - Raiso ho azy ny hetsika miorina amin'ny angon-drakitra tena izy hanatsarana ny fifamoivoizana.
Advanced Targeting - Fepetran'ny geo, fitaovana, karazana fifamoivoizana, mpitatitra, data hafa manokana.
Fampandrenesana Insights - Mahita lamina, fironana, ary ny tombotsoan'ny orinasa amin'ny angon-drakitrao, zarao amin'ireo mpiara-miasa aminao.
Fanaraha-maso ny rohy fanaraha-maso 24/7 - Fantaro raha marina ny rohy fanarahana amin'ny tolotra rehetra ao amin'ny rafitrao.
Tsidiho ny Swaarm Raha mila fanazavana fanampiny
Tags: ad performancesehatra fanarahana dokaadtechHafanàm-po an dokam-barotravarotra fampisehoanasehatra marketing amin'ny fampisehoanaswaarm
Elementor: Tonian-dahatsoratra mahafinaritra amin'ny famolavolana pejy sy lahatsoratra WordPress tsara tarehy